तपाईंको साइटमा डरोडर ट्राफिक रक्सहरू? - Semalt विशेषज्ञ थाहा छ के गर्ने
जुलिया वाश्नेभा, Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, उनी कसरी रसियन स्प्यामको साथ पहिलो पटक सामना गरिनको अनुभव साझा गर्छिन्।
स्प्यामरहरू फेरि सक्रिय छन्, र हामीले उनीहरूबाट छुटकारा पाउन उपायहरू गर्नुपर्छ। जब रूसी स्प्याम ट्राफिकले मेरो वेबसाइटमा मद्दत गर्‍यो, मैले अधिक खन्नको लागि निर्णय गरें र नयाँ स्प्यामरले मेरो गुगल एनालिटिक्स डाटा बिगार्न कोशिश गरिरहेको छ भनेर देखेर म छक्क परें। सबैभन्दा पहिले, मैले रेफरल ट्राफिक जाँच गरें किन मेरो वेबसाइटले रूसबाट धेरै यातायात प्राप्त गर्दछ। मैले अपराधीलाई कुनै समय भेट्टाइन र उपायहरू गर्ने निर्णय गरें। रूसी स्प्यामर निम्न साइटबाट आएको थियो: फोरम.टोपिक डारोडार.कट।
जब मैले यो लिंक खोलेँ र केहि पोष्टहरू अनुसरण गरे, मैले पाए कि धेरै स्पामकर्ताहरूले वेबसाइटहरू नष्ट गर्ने तरिकाहरूमा छलफल गरिरहेका थिए। यो लिंकले मलाई शॉपिंग साइटहरू जस्तै ईबे डॉट कॉम, अमेजन डट कम, र अलीबाबा.क. म स्प्यामरहरू के गर्न खोजिरहेका थिए भन्ने कुरा बुझ्न असफल भए, तर अन्ततः मलाई थाहा भयो कि उनीहरूले मलाई धोका दिन खोजिरहेका छन् ताकि म तिनीहरूको लिंकबाट केहि किन्न सकें। तब मैले मेरो पृष्ठ रिपोर्ट जाँच गरेँ र पत्ता लगाए कि कुनै एक पृष्ठ मेरो वेबसाइटमा होस्ट गरिएको थिएन। मलाई यो कुरा जान्न छक्क लाग्यो कि उही पृष्ठको लिंक मेरो सबै ग्राहकहरु का साइटहरु मा अवस्थित थियो। कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईले पृष्ठ शीर्षक रिपोर्टहरूमा पृष्ठ फेला पार्नुहुनेछ किनकि ह्याकरहरू र स्प्यामरहरूले यूआरएल "/" तपाइँको सामाजिक मिडिया प्रोफाइलहरू र वेबसाइटहरूलाई मूर्ख बनाउन प्रयोग गर्दछ।
स्प्यामरहरू सबै गुगल एनालाइटिक्स खाताहरूमा उही डाटा पठाउन कोशिस गर्दै थिए। र अब, तपाईंलाई यो लिंक पत्ता लगाउन र यसलाई तपाईंको गुगल एनालिटिक्स ड्यासबोर्डमा रोक्नको लागि सजिलो छ। तपाईलाई डेटा एनालिटिक्स कोड र युए नम्बरको तपाईको खाता चाहिन्छ, जुन इन्टर्नेटमा नि: शुल्क उपलब्ध छन्। कोड र खाता नम्बर स्प्यामरको साइट ब्लक गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि यसको डाटा तिनीहरूको गुगल एनालिटिक्स खातामा रेकर्ड गरिएको छैन। यसको सट्टामा, यो तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा रेकर्ड गरिनु पर्छ। साधारण स्वचालनले प्रत्येक Google एनालिटिक्स खाताको लागि एनालिटिक्स खाता नम्बर उत्पादन गर्न सक्दछ। यसैले, तपाईले आक्रमणको सर्वव्यापी प्रकृतिको बारेमा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जान्नको लागि सबै चीज जाँच गरेको थिएँ यो गुगल विश्लेषकको मात्र समस्या हो किन कोही व्यक्तिले दावी गरे कि यो वैधानिक ट्राफिक हो। म हाल मेरो केहि साइटहरू र गुगल एनालिटिक्स खातामा वेबट्रेंड्स एनालिटिक्स चलाउँदैछु। वेबट्रेंड्सले रेफरल स्पाम र नक्कली ट्राफिकको बारेमा केहि पनि गर्दैन, त्यसैले मेरो निष्कर्ष यो Google विश्लेषकमा एक हमला हो भनेर। मलाई शंका छ कि ती निर्दोष गुगल एनालाइटिक्स प्रयोगकर्ताहरूलाई धोका दिन्छ कि अधिक र अधिक व्यक्ति आफ्नो सम्बद्ध लिंकबाट किनमेल गर्न सक्छन्।
कसरी तिनीहरूलाई रोक्न?
दुर्भाग्यवस, तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव छैन। जस्तो कि सिर्जना गरिएको डाटा तपाईंको सर्वरमा होस्ट गरिएको छैन, यी स्प्यामरहरूलाई हटाउने कुनै तरिका छैन। तर तपाई गुगल एनालिटिक्सबाट डाटा हटाउन सक्नुहुनेछ, यो सुनिश्चित गर्दै कि तपाईंको तथ्या the्क वास्तविक प्रदर्शनसँग मेल खान्छ।
रूसी स्प्यामरहरू र उनीहरूको रेफरल प्रोग्रामहरूबाट ट्राफिक रोक्न सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा फिल्टरहरू बनाउनु हो। प्रशासक सेक्सनमा जानुहोस् र फिल्टर विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंले "फिल्टर" दृश्य प्रयोग गर्नु भएको छ, जहाँ तपाईले नयाँ फिल्टरहरू थप्नु पर्ने हुन्छ। केहि फिल्टरहरू बनाउनुहोस् र होस्टनाम (co.lumb.co) मा रेफरल ट्राफिक बहिष्कार गर्नुहोस्। परिवर्तन गरिएको बचत गर्नु अघि फिल्टर प्रमाणित गर्न नभुल्नुहोस्।
म आशा गर्दछु कि यी निर्देशनहरूले तपाईं र तपाईंको वेबसाइटलाई ठूलो हदसम्म फाइदा पुर्‍याउँछ। यदि तपाईं स्प्यामको महत्वपूर्ण संख्याबाट प्रभावित भएको हो भने तपाईंले आईटी विशेषज्ञसँग जडान गर्नुपर्छ र यथासक्दो चाँडो तपाईंको मुद्दालाई सुल्झाउनु पर्छ।